I-Intel ifuna ukulwa ne-AMD ngokukhawulezisa isicwangciso sayo sokumiliselwa | Ndisuka mac
Kwiintsuku ezidlulileyo, iApple iqinisekisile ukuba iyakuba neetshipsi ze-AMD kuyilo lwayo ikamva leMac. Kwaye ayiloxesha lokuqala kwiinyanga ezidlulileyo, njengoko kukhankanyiweyo kufunyenwe ikhowudi yeBetas yeMacOS Sierra. Kuhlala kubonakala ukuba ukuphunyezwa kwenziwa njani, njengoko singakholelwa ukuba i-Intel Chips ibuyiselwe ngokupheleleyo kwindalo ye-Apple kwaye ngakumbi kwiiMacs.
Namhlanje sazi ngoku Digitimes, ukuba i-Intel ithathe isigqibo sokuqhubela phambili ishedyuli yayo yokukhutshwa ukuze ichase izicwangciso ze-AMD. Isishukumisi yayikukukhululwa kweprosesa Ryzen
Ke ngoko, i-Intel iya kuqhubela phambili ukubonakaliswa kweemveliso zayo ezintsha kuluhlu lwayo ngeenyanga ezintathu Ingxangxasi. IIsicwangciso sokutshintsha kwe-ntel, ukubonisa iiChips ngaphandle kwemizobo, ngokungafaniyo neprosesa yaseSkylake kunye neKaby Lake. Kwelinye icala, olu tshintsho luvumela i-Intel ukuba ibonelele ngokusebenza okuphezulu ukuya kuthi ga kwi-12 cores.
Ezi processor XeonBanokubakho ngenyanga kaJuni, xa besingalindelanga ngaphambi kokuwa. Ezi modeli azinandawo kulungelelwaniso lwangoku lwe-Apple, kodwa mhlawumbi inkampani iya kuzisebenzisa kwi-Mac enekhadi lemizobo elinikezelweyo, njengoko kunjalo nge-iMac.
Kodwa i-Intel kusafuneka isebenze nzima, njengoko imveliso ye-140 W ye-thermal ingamkelekanga kwiimodeli zangoku. Amarhe athetha endaweni yokuba, imodeli yeXeon E3 iya kumiselwa kwiinguqulelo ngakumbi ngalinye yeeMac ezizayo.
Ngakolunye uhlangothi, kumgca wendabuko we-Intel, Ikhefu leKafesi unokuba ngumlandeli wangoku ILaby Lake. Ziza kusetyenziswa kwiiMacs zangoku, ukuguquguquka ngakumbi ukutsho nje okuncinci. Ezi ziyakwakhiwa nge-14 nm. Ukukhutshwa kwayo okubonakalayo kwintengiso kuya kuba ngu-Agasti walo nyaka, xa umboniso wayo wawungalindelwanga kude kube nguJanuwari 2018.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Intel ifuna ukumelana ne-AMD ngokukhawulezisa isicwangciso sayo sokumiliselwa